How to Learn Guitar (गितार कसरी सिक्ने) ? Tips for Beginner Guitar Learner
How to Learn Guitar (गितार कसरी सिक्ने)?
How To Learn Guitar: गितार बजाउने चाहना सबैलाई हुन्छ र गितार बजाउनु भनेको खासै गाह्रो कुरा पनि होइन तर गीतार एकै पटकमा कसैलाई पनि बजाउन आउदैन। गितार बजाउनु सामान्य करा भने होइन यसको लागि कडा परिश्रम, मिहिनेत र धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
गीतार सिक्नलाई एक दिन बजाएर दुई दिन बजाएर पनि हुदैन र यसको बारेमा नजानी आफ्नै सुरमा बजाएर पनि हुदैन। गितारको अलगै कोर्ड, नोट र स्केल हरु हुन्छ। गीतार सिक्नको लागि तपाइँसँग एउटा गीतार साथ मा हुनु पर्छ। चाहे त्यो महँगो होस् या सस्तो फरक पर्दैन तर सिक्दै गएपछि सक्नुहुन्छ भने अलि राम्रो क्वालिटीको गितार लिएको राम्रो।
गितार सिक्नको लागि तपाईले दैनिक रुपमै बजाईराख्नु पर्छ। दिनको १ देखी २ घन्टा या त त्यो भन्दा बढी समय मिल्छ भने गर्न सक्नु हुन्छ। कतिपय को भनाई के छ भने १५ मिनेट या आधा घण्टा सिक्यो भने २, ३ महिनामा बजाउन सिक्छ। यो गलत हो यदि तपाइँ १५ मिनेट या आधा घण्टा मात्र सिक्नु भयो भने तपाइँ पक्का हप्ता दिनमा गितार बजाउन छोड्नु हुन्छ तपाईलाई लाग्छ कि गितार बजाउन साचै नै गाह्रो काम हो। किनभने तपाईले सिक्नका लागि पर्याप्त समय निकाल्नु भएन कुनै पनि सिप बिना तयारि, बिना मिहिने कसैलाई आउदैन। ठुला ठुला गितारिष्टहरु गितार सिक्नका लागि १ दिनमा २५ घण्टा खर्च गर्छ, भन्नुको मतलब त बुझुनु भयो होला त्यति सम्म मिहिनेत गर्छ।
तपाईलाई गितार सिक्न कुनै क्लास लिनु पर्छ भन्ने छैन। कतिपय ठाउँमा यसका लागि ट्रेनिंग क्लासहरु हुन सक्छ तर यो सबै ठाउँमा सम्भव हुदैन र यसको विकल्प हो अनलाइन भिडियो गूगल, युट्युब, फेसबुक याहु लगायत का अन्य सञ्जालमा यस सम्बन्धि पर्याप्त भिडियो र लेखहरु हुन्छ त्यसलाई हेरेर पढेर सिक्न सक्नु हुने छ।
गीतार सिक्नका लागि तपाईलाई (सिकारु) पहिला गितारको बारेमा यो १० कुरा जान्न जरुरि हुन्छ। (10 Tips for beginner guitar learner)
गीतारको बारेमा जानकारी, कार्ड र रिदमको बारेमा र अन्य बेसिक कुराको जानकारी भइसकेपछि मात्रै तपाइँ सामान्य प्रकारको गीतहरुमा बजाउन सक्नु हुनेछ।
यसरी नै तपाइले दैनिक निरन्तर अभ्यास गर्दै जानु भयो भने तपाइँहरु गितारको जुनै कार्ड, रिदम, स्केल, नोटहरुको बारेमा पोख्त बन्नु हुनेछ।
Top5Acoustic Guitar in 2020